Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Ngaba i-Zombie Apocalypse ikwi-Horizon?
Yenzekile ekugqibeleni, i-zombie apocalypse ilapha! Ubomi njengoko sisazi buza kutshintsha ngonaphakade! Azisekho iinkqubo zeTV, akusekho midlalo yevidiyo, akusekho Twitter!?! Sosinda njani!? Kwaye linda nje umzuzwana, siya kudla ntoni?! Akusekho kutya okukhawulezayo, akusekho venkile zekofu, akusekho mfuneko yokuhanjiswa kokutya kunye neevenkile zokutya? Siza kwenza ntoni ehlabathini?
Iindaba ezimnandi kukuba, esi sihloko asiyonyani. Iindaba ezimbi kukuba, awukazilungiselelanga. Kodwa jonga kwicala eliqaqambileyo. Isitshixo soBomi silapha ukunceda! Singakulungiselela wena, usapho lwakho, abahlobo bakho kunye nommelwane wakho kule nto. Ngokufunda ukukhulisa ukutya kwakho, ukwenza abantwana bakho baqhele ukutya ukutya okusempilweni, okutsha okuvelisayo kunye nokusebenza nommelwane wakho ukusasaza kunye nokuthengisa oko kutya, sonke sinokusinda kwi-apocalypse ye-zombie! Ngethamsanqa, ukukhulisa ukutya kwakho kumnandi, kulula kunokuba ucinga, umsebenzi omncinci kunokuba ucinga, kwaye akufuneki uwenze wedwa! Usapho lweSitshixo sokuBonelela ngoBomi lunayo yonke into oyifunayo. Ngothungelwano lwamahlakani ethu kunye nabasebenzi bethu abanetalente yootitshala, sinokukubonisa indlela yokukhulisa ubonelelo oluninzi lweziqhamo nemifuno.
Ngaphezulu koko, ukukhula ngokwasemzimbeni kunye nokufunda iindlela ezilula zokubumba umgquba ngenkunkuma yakho yezityalo, ungaphinda uwakhe umhlaba kwaye uxhomekeke nangaphantsi kwizichumisi. Isitiya sakho siya kukhula kakhulu kwimihlaba ebuyiselweyo ukuze incede izityalo zikhule ngokugqibeleleyo. Ngokunxibelelana noluntu lwakho, wonke umntu unokugxila ekukhuliseni into eyahlukileyo kancinane ukuze siqhubeke sizonwabisa ngohlobo olumnandi. Ukukhetha okulula, ukunkonkxa, ukuphelelwa ngamanzi emzimbeni kunye nokugcina ukutya ngokufanelekileyo kuya kuqinisekisa ukuba uluntu luya kuqhubeka lukhula, nangona ebusika obunzima.
Uyabona ke, akukho nto inokukhathazeka ngayo! Nokuba umhlaba ujike ube yincithakalo, awuyi kuba nexhala malunga nokutya inja ephelelwe lixesha ubomi bakho bonke. Wena kunye noluntu lwakho ungadla njengookumkani ngenxa yokuba ufumene izakhono kunye nolwazi oluyimfuneko ukubonelela ngezona mfuno zilula zabantu, ukutya okumnandi. Kwaye iindaba ezimnandi zezi, nokuba i-apocalypse ye-zombie ayinakuze iphumelele, ngoku unamandla okunciphisa indawo yakho yekhabhoni, uphile ngokuzinzileyo, wakhe amajoni omzimba omelele ngokutya i-pesticide kunye nokutya okungekho khemikhali, ukonyusa ixabiso lepropathi yakho kwaye bonelela uluntu lwakho ngothungelwano lokuzanelisa. Siyakukhuthaza ukuba uthathe inyathelo lokuqala kwaye uqhagamshelane nathi kwi-Key To Life Supply ngaphambi kokuba kube kudala kakhulu!